Kucatshulwe esintu, Kucatshulwe yezilwanyana, Sweeteners, Plant Susa Oil - Tong Rui Bio-Tech
Fruit yemifuno Powder
Organic Powder Incindi
ZoJoliso Professional, Yenza Ubomi wethu Better!
I-Nanjing Tong Rui Bio-Tech Co, Ltd. ebizwa ngokuba yi-TRB, ibigxile kwizicatshulwa zendalo kangangeminyaka eli-18, i-TRB yinkampani esekwe kwitekhnoloji edibanisa iR & D, imveliso kunye nentengiso yentengiso yamanye amazwe. Iimveliso ze-TRB zibandakanya izicatshulwa zezityalo, izicatshulwa zezilwanyana, iiswiti, ii-nootropics, incindi yeziqhamo kunye nemigubo yemifuno, iioyile ezifanelekileyo kunye nezongezelelo zesondlo. I-TRB okwangoku ineefektri ezimbini, enye iyimveliso yefriji yendalo ecocekileyo, enye iyimveliso yemveliso yeenyosi, kwaye sinothotho lweziqinisekiso ezinje nge-ISO9001, ISO22000, HACCP, ORGANICAL, FDA, HALAL, KOSHER.
Alpha GPL Powder 99%
Green Tea Susa
Isicatshulwa seGotu Kola
Ezihlobene isayensi nethekhinoloji
Sisoloko phambili yenzululwazi kunye nobugcisa, bathathe inxaxheba kwiinkomfa zasekhaya ngamazwe zemfundo kunye ukutshintshiselana ubugcisa kwezoshishino, zize ziqulunqe imigangatho Khipha zendalo ezifanelekileyo. Senze anti-igcwala, izithako aphrodisiac, sweeteners kunye nootropics. iimveliso zethu ethengiswa kushushu imida inzululwazi neteknoloji emarikeni.
amandla Top R & D
Sihlangene amaqela top R & D kunye nezixhobo China. Ngaxeshanye, siye safumana thethwano zobugcisa kunye neenkonzo ezivela kumaziko afanelekileyo yaseYurophu American. Thina iilebhu zethu ozimeleyo, liphuhlise izithako ezisebenzayo akhutheleyo izicatshulwa ezinxulumene zendalo, yaye liphuhlise uphando Series nzulu avela kunye monomers.
kwiminyaka eli-18 yamava kumazwe angaphandle, iimveliso series ngaphezulu kwama-200, amawaka izenzo zamazwe ngamazwe yokuhamba, amava zorhwebo kumazwe angaphezu kwama-40, aqhelekileyo kunye nemigaqo efanelekileyo kazwelonke, ngokubonelela abathengi kunye iimveliso zethu ezingundoqo kunye neemveliso ezishushu. Kwangaxeshanye, sidibana neemfuno nezinye iimveliso yorhwebo abathengi bethu nokubonelela ngezisombululo omnye-stop iimveliso zempilo Chinese.
Ubhubhane lube nefuthe elibanzi ...
Iimpawu ezihambelanayo: impilo yentliziyo, chro ...
Imithi, ezona zidalwa zixhaphakileyo ...
Kutshanje, ingxelo yakutshanje yedatha ikhutshiwe ...
Bhalisa ku Newsletter Zethu:
Pioneer Bio-Park, Akukho Bridge 127 North Road Xishan, Yu Hua Tai District, Nanjing, China 210012